भर्चुअल माध्यमबाट भैंसी सम्मेलन – Click Khabar
शनिबार, कार्तिक ०६, २०७८ | १२:४४:४४ |
चितवनः यही कार्तिक ८ गते देखि १२ गते सम्म नेपालमा पहिलोपटक एसियन भैंसी सम्मेलन हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजकमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर, कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय, एसियन वफेलो एशोसियसन र इन्टरनेशनल वफेलो फेडेरेशन आयोजना गर्न लागिएको हो ।
१० औं एसियन वफेलो कंग्रेस आयोजक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. भूमिनन्दन देवकोटाले सम्मेलन भर्चुअल विधिबाट हुने जानकारी दिनुभयो । आज यहाँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि बिश्वविद्यालयले सो जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा देवकोटाले भैंसी सम्मेलनमा १७ देशका विज्ञहरुले ७ विधामा १ सय ३५ बढी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । सम्मेलनमा ३ सय ५० बढी वैज्ञानीकहरु सहभागी हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
वैज्ञानिक, प्राध्यापक, कृषक तथा विद्यार्थी सहभागी भएर ५ दिनसम्म छलफल हुनेछ । भैंसी पालन, व्यवस्थापन, स्वास्थ, बजारिकरण एवम् उपयोगिता बारे भएका नविनतम् खोज, अनुसन्धानबारे गहन छलफल हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सन् २०१७ मा सौराहामा स्थानीय रुपमा भएको यो सम्मेलन सन् २०१८ मा भारतमा भएको थियो । कृषि तथा विज्ञान विश्वविद्यालय र तत्कालीन कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानले पशुविज्ञान, पशुचिकित्सा क्षेत्रका वैज्ञानिकले निरन्तर भैंसीको अनुसन्धानलाई केन्द्रमा राखेर पोषण, व्यवस्थापन, रोग निदान तथा उपचार एवम् बेमौसमी प्रजनन प्रविधिमा योगदान गर्दै आइरहेको छ ।
बेमौसमी प्रजनन प्रविधिबाट करिव ४७ प्रतिशत उत्पादन क्षमता पाइएको छ । स्थानीय रुपमै हर्मोन उत्पादन गर्न सके बेमौसमी प्रजनन कार्य किसानको गोठमा पुयाउन विश्वविद्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयले भैंसी उत्पादनमा भएका नयाँ अनुसन्धानबारे पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने देवकोटाको भनाई छ । सम्मेलनको उद्घाटन कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले भर्चुअल माध्यमबाटै गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सम्मेलनबारे जानकारी लिन वेभसाइट, इभेन्टस् मो एप तथा जुम वेभइनर प्लाट्फर्मको प्रयोग गर्न सकिने छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले नेपालमा ओझेलमा परेको पशुपालनलाई उचाई दिन यो सम्मेलन सफल हुने बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वैज्ञानिक सम्मेलनले पशुपालन विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भैंसीलाइ कालो सुनका रुपमा लिइने भएकाले नयाँ प्रविधि र खोज अनुसन्धान प्रयोगमा ल्याउन सके अर्थतन्त्रमा सहयोग वुग्ने बताउनुभयो । नेपालमा दुग्ध उत्पादनमा भैंसीको करिव ६५ प्रतिशत र मासु उत्पादनमा ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । सन् २०१७ मा नेपालमा भएको सम्मेलन पछिनै विश्वविद्यालयले भैंसी अनुसन्धानमा दिर्घकालिन योजना निर्माणमा लागिपरेको छ ।
यसका लागि भैंसी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । सम्मेलनकै कारण वैज्ञानिक बीचको सन्जाल मार्फत ज्ञान, सीप आदानप्रदान गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा लिइएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईयो । एसियामा ९० प्रतिशत भैंसीपालन हुँदै आएको छ । नेपाल एसियामा भैंसी उत्पादनमा चौथो स्थानमा रहेको सो अबसरमा जानकारी दिईएको थियो । नेपालमा करिब ५२ लाख भैंसीको संख्या रहेको अनुमान छ ।
स्थानीय जातहरुमा पहाडतिर लिमे, पारकोटे, गड्डी र तराइतिर तराइ जात र मुर्रा जातका भैंसीपालन हुँदै आएका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय आयातित हाइव्रिड जातका भैंसीपालन समेत बढ्दो क्रममा रहेको देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । दूध दिन छाडेपछि पनि मासु र छाला उपयोग हुने भएकाले भैंसीलाइ बहुउपयोगी जनावर मानिन्छ ।